Ngwarira iyo Internet Inozivikanwa | Martech Zone
Ngwarira iyo Internet Inozivikanwa
NeChishanu, Gunyana 25, 2009 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Mavhiki mashoma apfuura, ndakagamuchira email kubva kune mumwe mukadzi achibvunza nezve yangu Bhuku paBlogging uye SEO. Yakanga iri yakati rebei inosiririsa email - kuverenga kuti mukadzi uyo aida kutenga yangu e-Bhuku raive rashandisa tani yemari pane saiti kwayakataurwa nezvayo uye isina kuwana mhinduro munguva yakapfuura. Sezvineiwo, chinyorwa chavakaverenga ndechimwe chandakashandisa tani yemari kuti ndiise ipapo.
The Internet Inozivikanwa saiti yevanhu yaive nenhamba dzinoyemurika uye rakatonyanya kunakidza runyorwa rwevashambadzi. Ivo vaiti vanopfuura makumi mashanu evaverengi vezuva nezuva pakati pezvese zvavo zvekugovera masosi. Ndo vateereri vakanaka kusvika! Uye vateereri vaive shangu-mukati yechigadzirwa changu. Izvo zvaive zvese ipapo: eyeballs uye yakanangwa vateereri. Kana kuti?
Mwedzi mushure mekunge posvo yamhanya uye ini handina kana 200 vashanyi vanobva saiti. Ndo vashanyi… kwete shanduko… ingori vashanyi. Pane mazana maviri evashanyi, hapana kana munhu mumwe chete akatenga e-Book. Ndakazviwana ndiri mudambudziko rakafanana nemukadzi akandinyora. Akanyunyuta kuti akange ashandisa chitsama chemari uye haana kuzombowana mhedzisiro kubva kune chero rairo raakapa iye rwakabhadharwa for kubva pawebhusaiti iri kubvunzwa. Iyo webhusaiti yaibva kune mumwe munhu Internet Inozivikanwa.
Mufananidzo kubva kuAmit Gupta's blog
Dzidziso yangu paInternet Yakakurumbira
Saka, uine izvozvo mupfungwa, uye kuunganidzwa kwe Internet Inozivikanwa vanhu vandinoziva kana vakaita bhizinesi navo, heino dzidziso yangu:
Internet inozivikanwa vanhu vakanaka pachinhu chimwe chete ... kuzviita ivo pachavo Internet inozivikanwa.
Mazhinji acho haanyatsoshanda nevatengi (kunze kweavo vanoda kuhaya mumwe munhu Internet inozivikanwa uye hauna tarisiro yemhedzisiro). Vazhinji vavo vari mubishi kuyedza kuchengetedza chitarisiko chekuti ivo vanoteverwa zvakanyanya uye vakangwara kupfuura isu tese. Mazhinji acho anokurumidza, akangwara, nenjere, uye masters ezviri pachena. Vazhinji vavo vane mabhuku emabhuku. Vamwe vavo vari mubishi kuwedzeredza nhamba kuti zvirambe zvichioneka.
Vakafunga kuti shanduko kubva mukushanda nesimba uye mhedzisiro yekungove Internet Inozivikanwa yaive nzira iri nyore yekuita mari. Sei? Nekuti isu tinoda imwe yavo muto ... tinoda kukwidza tasva… tinoda nzira iri nyore, futi.
Hazvisi nyore, zvakadaro. Usatarisira kuwana mibairo kana iwe uchikanda imwe mari ku Internet Inozivikanwa… Ingo rangarira kuti urikubatsira kuvachengeta vane mukurumbira. (Uye zvakanaka, futi!)
Nezve iyi Blog
Ndosaka ndichifarira kwazvo iyi blog uye mabloggi ari mubhodhi (nezvakawanda zviri kuuya). Isu tese tiri vashambadzi vanoshanda zuva rega rega kusimudzira kubudirira kwevatengi vedu. Iyo blog ishungu yedu, kwete purofiti yedu. Pamwe rimwe zuva tichazobuda tobva tave Internet Inozivikanwa. Kana ari ini, ita shuwa kunyora nezvangu uye undibate ndizvidavirire, zvakadaro!
Kana ari mukadzi wacho, ndakamutumira kopi ya Corporate Kubhuroka kweDummies mahara uye ndokumubvunza kuti abhadhare chete kana achibatsirwa nebhuku iri. Izvo zvinoenda kune chero wenyu! Kana usina chokwadi, ndichafara kukutumira kopi!
Tags: Bloggingblogging for seokubatanidzwa blogginginternet inozivikanwa
Old Marketer maringe neNew Marketer. Uri ani iwe?
Inbound Kushambadzira uye Nyowani Yekutengesa Yekushandisa
Sep 26, 2009 pa 3: 36 AM
Ini ndinofunga chirevo ichi chinoti "zvese zvinopenya haisi goridhe." Zvinonyadzisa kuti kune vanhu kunze uko vasingade kuona kuti chigadzirwa / sevhisi yavo inogutsa zvinogutsa.
Sep 28, 2009 pa 8: 27 AM
Ehe, ndokumbira unditumire kopi ye25 Matanho ekubudirira e-Book mahara, uye ini ndichaitora nenzira imwecheteyo.